ဒင်းတို့ကြောင့် ရာဇဝင် စာပြင်ရမလို….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒင်းတို့ကြောင့် ရာဇဝင် စာပြင်ရမလို…..
ဒင်းတို့ကြောင့် ရာဇဝင် စာပြင်ရမလို…..
Posted by နွေဦး on Jun 18, 2012 in Creative Writing, Think Different | 58 comments
သူတို့လုပ်မှဘဲ ငါတို့ ဒုက္ခ….
ကုလားထိုင် ကို အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်သူ ထိုင် လို့ ခေါ်ရမလား..။
ကုလားပဲဟင်းကို အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်သူ ဟင်းလို့ ခေါ်ရမလား..။
ကုလားအော်သီးကို အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်သူ အော်သီး လို့ ခေါ်ရမလား..။
…………. လို့ ခေါ်ရမလား..။
ဆိုပါတော့လေ..သိပ်မဆိုးပါဘူး အကျင့်ရသွားရင်တော့ အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ တို့နိုင်ငံရဲ့ ရာဇဝင် သမိုင်း ကို ပြင်ဘို့ ကတော့ မလွယ်ဘူး..။
ရှေးအဆက်ဆက်က ရာဇဝင်ကို ဘယ်လိုပြင်မလဲ ။
ရတယ်ဘဲထားပါတော့ ..ခေါ်ရ ပြောရတာ ကို အဆင်မပြေဘူးလေ ။
“ဦး အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်သူ မဟာရာဇဝင်ကြီး ” ဆိုပြီး..။
တောက်…. ဦးကုလား မဟာရာဇဝင်ကြီးတောင် ဒင်းတို့ကြောင့် ပျက်ရမလိုဖြစ်နေပြီ..။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဆိုတာ ဘင်္ဂါလီတွေ အတွက် နေရာလား..။
ဟုတ်ဘူး။ ဘင်္ဂါလီတွေ ၀င်ဝင်လာတဲ့နေရာ :-)
အဲဒါကြောင့် ပင်လယ်က မခံနိုင်လို့ အော် တာနေမှာ နော့။
ပင်လယ်အော် ဆိုတာ ဒင်းတို့ကြောင့် ပါလား ။(မှတ်ဘွယ်)
ကြံကြံဖန်ဖန်သူပဲတွေးတပ်ပလေ့တယ်။ နောက်ပြီး ကုလားအုတ်။ ကုလားဖျင်း။ ကြက်ကုလား။ ဆိုတာတွေအတွက်လဲ စဉ်းစားထားအုန်းဗျာ။
ဖဲချပ်ထဲက အ၀ှာကိုကော ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟင်..
တစ် နဲ့ ကိုး ကနေ ဟဝှာ တက်မှ ဘူကျတယ်
၆ ၃ ကျရင် ဟို အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ က မတက်ဘူး..။
အင် …ဂီ ဘာမှ ၀င်မကျောထားဘူးလေ…
ဟိုဘက် ပိုစ့် မှာလို မီးရှို့  ခံ နေရဦးမယ် .. အူး ဗိုက်ရေ …။
Jack, Queen & King.
ဒါဆို ကုလားအုပ်ကို အစ္စလာမ် ဘာသာကိုးကွယ်သူအုပ်
ဒါမှမဟုတ် မြန်မာမွတ်စလင်အုပ်လို့ခေါ်ရမယ် ….
ဟေ ဒါကြီးက သများကို မျာ ပြောနေသလားဟင်………. မနွယ်ဘင်နော်……. လူပုလေး မွေးပါစေတော်.ဟွန်.
ဟယ် မရည်ရွယ်ပါဘူး တိုက်ဆိုင်မူရှိပါက ခွင့်လွှတ်ပါရန် ….
ကုလားကို.. ကုလားလို့..မခေါ်ရဘူးလို့.. ဘယ်သူကပြောခဲ့လို့လည်း..
အစိုးရသတင်းစာအထောက်အထားနဲ့.. ဆန္ဒပြသူတွေပြောတာတွေကို.. မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ (သတင်းစာ..တီဗီ..ဂျာနယ်)..ပြန်ကြည့်ချင်မိတယ်..။
သူကြီး.. ပြဿနာ မရှာပါနဲ့ဗျာ…
မွတ်ဆလင် ကုလားလို့ ရေးမိတဲ့ အတွက် ပြင်ဆင်ချက်တွေ
တောင်းပန်တာတွေ လုပ်ခဲ့ရတာရှိတယ်လေ သူကြီးရဲ့ ။
တကယ်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေ အားလုံးက
အဲဒီ စကားလုံက စ သွားတာလို့တောင် ပြောလို့ရတာပါ ။
ကုလားကို ကုလားလို့ မခေါ်ရ ဘူးလို့တော့ ဘယ်သူကမှ မပြောပါဘူး ။
ဒါပေမဲ့ ခေါ်မိ ပြောမိလို့ ပြဿနာ ရှာပြီး နယ်မြေတောင်းလာမှာ စိုးလို့ ကြိုရှောင်တာပါ ။
ကျုပ်နားလည်သလောက်.. ဆူးလေမှာဆန္ဒပြသူတွေဆိုလိုတာက.. နိုင်ငံအဆင့်အစိုးရသတင်းစာမှာ..သုံးလိုက်တဲ့.. လူမျိုးရေး.. ဘာသာရေး ခွဲခြားအဓိပါယ်ရောက်စေတဲ့.. အသုံးအနှုံးကို… မကြိုက်တာပါ..
ကုလားလို့ ..သုံးတာကိုမကြိုက်ကြတာမဟုတ်ဖူးလို့.. ယူဆမိပါတယ်..
– ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းက.. ကုလပုတ္တ.. အမျိုးကောင်းသားတဲ့..
– ဦးဂိုအင်ဂါက.. ကုလား = ကုသလ = ကုသိုလ် တဲ့..
– ဦးကုလား ဆိုတဲ့…ဦးကုလားမဟာရာဇ၀င်ကြီးရေးတဲ့သူကတော့.. အဖေက.. သူဌေးမျိုး။။အမေဖက်က.. စော်ဘွားနဲ့. မြို့စားမျိုးပါ..။ (မြို့သာစားမုနောဒိုင်းမှုးကျော်ထင်ရဲ့သမီးမဏိသြဃနဲ့.. စဉ့်ကိုင်သူဌေးဒေ၀သေဋ္ဌတို့ရဲ့သား.. အင်းဝမြို့မှာဖွားတဲ့.. ဦးကုလား)
– ဟင်ဒီဘာသာစကားမှာတော့.. ကလ ဆိုတာ.. မည်းတာကိုခေါ်တယ်တဲ့..။
တည့်တည့်ပြောရရင်တော့… ကုလားဆိုတာ.. မြန်မာတွေအတွက်.. အိန္ဒိယပြည်ကအနွယ်တွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပြီး..နှိမ်ချလိုတဲ့သဘောနဲ့..ခေါ်ခဲ့ဟန်မတူပါ..
… အိန္ဒိယပြည်မှာ.. မွတ်ဆလင်(အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ) က.. လူနည်းးးးးးးစုဖြစ်ပါတယ်..။
ကုလား ဆိုတဲ့.. အသုံးအနှုံးကို..ကာယကံရှင်များက မကြိုက်ရင်.. အိန္ဒိယပြည်ကအနွယ်တွေအားလုံးရဲ့.. သဘောထားတောင်းရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒီအသုံးအနှုံးဟာ.. မွတ်ဆလင်များနဲ့.. တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပါ..
ဒါပေမဲ့.. ဒီအသုံးအနှုံးကို.. နိုင်ငံအဆင့်သတင်းစာက.. လူမျိုးရေး..ဘာသာရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. အကဲဆတ်နေတဲ့အချိန်မှာသုံးရင်.. ဒါဟာ.. သဘောရိုးမဟုတ်ဖူးလို့..ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ကျုပ်သဘောကတာတော့.. လူတယောက်ကို.. တယောက်က.. သူမကြိုက်တာ.. မခေါ်ဖို့ပါပဲ..
ကဲ..သဂျီးက..သဂျီးဆိုတော့ .. သူမကြိုက်တာကို မခေါ်တော့ပါဘူး..။ အဲ..အဲ. ဒါဆိုဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ .. သဂျီးရယ်.. သူတို့လို အသားအရေ၊ မုတ်ဆိတ်တွေ နှုတ်ခမ်းမွေးတွေရှိ တဲ့လူကို ဘယ်လိုခေါ်ရမလာ… မူစလင်လို့ခေါ်ရမလား၊ ဟိန္ဒြူလို့ခေါ်ရမလား… မှားခေါ်မိရင်ကေား စိတ်ကောက်ကြအုံးမလား…??????
ညည်းနော် ငါနော် တူမနော်
ဟား ဟား ဟား… ကဲ မှတ်ပလား… ကုလားမို့လို့ ကုလားလို့ ခေါ်တာကို ယုတ်ညံ့တယ်ဆို…ဆို….. နွေဦးရာ ပြောလိုက်စမ်းဘာ..ပြောလိုက်စမ်းဘာ..
ကုလားကိုကုလားလို့ မခေါ်ရဘူးလို့ သတ်မှတ်ချက်မရှိပေမယ့် ..
ကုလားတွေက ကုလား ကို ကုလား လို ခေါ်တာမကြိုက်တဲ့ ကုလားတွေ အများကြီးပဲဗျ …
ဖဲရိုက်တော့ ကုလားကား ကြည့်တယ်တဲ့
ကလိန်ကကျစ် ပြောတယ် ဆိုရင် ကုလားဘန်ထိုးတယ် တဲ့..
ဒီစကားအသုံးအနုံးတွက်ကပ်တဲ့ကိစ္စအရင် ကလဲ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်၊
နန်းမတော်မယ်နု အာဏာထက်စဉ်ကာလက (နု)ဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးရပါဘူး။
နောက်တော့ ၀ိုင်းတည့်မတ်ပေးသူရှိတော့မှ သုံးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုပုံစံ ဘယ်လို့လေသံ နဲ့ခေါ်လိုက်တယ် ကပိုအရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။
သာမန်ရိုးရိုးဘဲခေါ်တာလား လှောင်ပြောင်ချင်တာလား နှိမ့်ချခြင်တာလား
ခေါ်သူပြောသူရဲ့ စိတ်ထဲက အတိမ်အနက်ကသာ အဓီကကျတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
(စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ ဒီကော်မင်းလေးကို ကိုစံလှကြီးရဲ့ ပိုစ်မှာလဲ တိုက်ဆိုင်လို ကော်ပီကူးပြီးထပ်မန်းပါမယ်။)
ကိုပေါက်က ကျနော့်ပို့စ်ကို ထည့်ပြောလို့ အဲဒီကိစ္စဖြစ်ပုံကို ကျနော်ပို့စ်မှာ ကျနော့်အမြင်လေး ရှင်းပြချင်မိတယ်။ ကွန်မန့်နဲ့ မလောက်ဖူးထင်လို့ သီးသန့်ဆောင်းပါးလေးနဲ့ ရှင်းပြရင်ကောင်းမလား မသိဘူး။ စဉ်းစားနေတုန်းပဲ။ ရှင်းပြပါရစေ ရှင်းပြပါရစေ ခင်ဗျာ့။
မေ့လို့ဗျာ။ “ဂေါတမဗုဒ္ဓများ သီးခံ သီးခံနဲ့ တခါမှ အရှုံးမပေးခဲ့ဘူး နိုင်အောင်ကိုလုပ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးကတော့ ခင်လို့နောက်တာ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်ဗျ။ ဘုရားရှင် ဘာလူမျိုးလည်းဆိုတာ မပါသေးဘူးနော်။ အဲဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့တော့ အားရင်တွေ့ကြသေးတာပေါ့။
ခင်ဗျားရှင်းပြမယ်ဆိုရင် အချက်အလက် အကိုးအကားနဲ့လာမယ်ဆိုတာသိလို့
ကိုပေါက်ရေ ဟိုဘက်ပို့စ်မှာ ရှင်းပြပြီးပေမယ့် ဒီပို့စ်ကိုလည်း လာခဲ့မိလို့ ဒီပို့စ်မှာလည်း လာရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုကြီးပေါက်ရေ ဘယ်ကလာ စိတ်ရှိရမှာလဲ ကိုကြီးပေါက်ရ။ ကျနော်က ပြောချင်နေတာပါ။ မဆွေးနွေးခင် ဘုရားရှင်ဟာ ဘာလူမျိုးလဲတို့ ဦးကုလားတို့ ကုလားကို ကုလားလို့ခေါ်တာ ကောင်းသလားတို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ အဓိကမဆိုင်တဲ့အတွက် ဒီမှာခဏဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ နောက်မှ သီးသန့်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။
အားလုံးပဲ ဒီလိုပါ။ကျနော်က မြန်မာ-မွန်ဂိုစစ်ပွဲ အကြောင်းကို သိတာလေးတွေ ချရေးပြီး လက်သွေးပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူကြီးက ဦးကုလားအကြောင်း သိချင်ပါတယ်လို့ မေးပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း သဘောရိုးနဲ့ မေးတယ် ထင်မိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်ကလည်း သိသမျှ အကြမ်းလေး ပြောမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကြီးလို အဖေအမေနာမည် တွေပါမသိပါဘူး။ အဲဒီမှာ သူကြီးက ယူအက်စ် ပညာတော်သင်ဆု အကြောင်းပြောပြီး “ပညာရေးအခြေခံသာရှိမယ်ဆို……တကယ်ပြောတာ” လို့ပြောပါတယ်။ သူက အရင်စပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျနော်စကား မှားသွားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပညာအခြေခံ ချို့တဲ့သူမို့ သူကြီးက ပညာရှိဆန်ဆန် စေတနာနဲ့ ပြောတဲ့စကား ကိုတမျိုး ထင်သွားပါတယ်။ နောက်ပြီး သူကြီး ပြောတတ်တဲ့ ဂေါတမဗုဒ္ဓများ တခါမှ သီးခံ သီးခံဆိုပြီး အရှုံးမပေးခဲ့ဘူးတို့ ဘာတို့ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေကို အမြင်မကြည်တာ ပါပါတယ်။
အခုမှ စဉ်းစားကြည့်တော့ သူကြီးဟာ စဉ်းစားတာကို Blind faith ထက်ဦးစားပေးတတ်တော့ တမင်သက်သက် မြန်မာတွေကို စဉ်းစားတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရအောင် အမုန်းခံ ငရဲကျမှာကို မကြောက်ပဲ ပြောပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လေးစားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ် သူတပါးမုန်းမှာ ငရဲကြီးမှာတောင် မကြောက်ပဲ အများအတွက် စဉ်းစားပေးတတ်တာ တကယ့် ဥတ္တမပုရိသလို့ ခေါ်တဲ့ ယောကျာင်္းကောင်း ယောကျာင်္းမြတ်တွေရဲ့ စိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကို ကျနော်က စိတ်ထဲတမျိုးထင်ပြီး ခံစားချက်နောက်ကို လိုက်ကာ “ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ အောင်ခြင်းတွေထဲမှာ သည်းခံတာမပါဘူး ဆိုတဲ့ ငါ့စကားနွားရ ပြောတာမျိုးကို ဆင်ခြင်ပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဝါနင်ပေးပါတယ်။” ဆိုပြီး ကြိမ်းမိပါတယ်။ ဒါကလည်း သူကြီးရဲ့ “ပညာရေးအခြေခံသာရှိမယ်ဆို….တကယ်ပြောတာ” ဆိုတဲ့ ပညာရှိဆန်ဆန် အရေးအသားကို နားမလည်လို့ပါ။
နောက်ပြီး သူကြီးက အရင်ပို့စ်တခုတုန်းက မိတ်ဆွေတဦးက “ကျုပ်က သူကြီးကို လေးစားတယ်ဗျ။ တကယ့်ကို လူပီသတဲ့ လူတယောက်ဆိုတော့” လို့ပြောပြီး နောက်တာကို သူကြီးက “ကျုပ်ကိုတော့ ပြောချင်သလောက်ပြော ရတယ် စိတ်မဆိုးတတ်ဘူး” လို့ပြောသဖြင့် သူရဲ့ သဘောကောင်းမှုကို အခွင့်ကောင်း ယူတာပါ။(ပြောသူအမည် မသေချာပါ။ ရွှေအိမ်စည်ဟု ထင်ပါသည်။ မှားလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ။)
နောက်ပြီး ကျနော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသား အရေးသို့ ပြန်ကြားချက် ဆောင်းပါးထဲမှာလည်း သူစိတ်မဆိုးတတ်ကြောင်းနဲ့ သူအပါအဝင် တချို့ရွာသားတွေက ရေးကြ ဆွေးနွေးကြရင် သိပ် serious မဟုတ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သဘောထားတတ်ကြတယ်လို့ ပြောသွားလို့ပါ။ အဲဒါလေးပြောထားချင်ပါတယ်နော…….လို့တောင်ပြောသွားပါသေးတယ်။(မင်းသားကြီး ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း လေသံဖြင့်)
တကယ်လည်း သူကြီးမင်း စိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့စိတ်နေစိတ်ထားကို အကဲခတ်နိုင်ပါတယ်။ သူက ဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်။ “အခုပြောတာတွေဟာ ကျုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဝါနင်ပေးပြောနေတာဖြစ်ပေမဲ့ သဘောတူသည်ဖြစ်စေ မတူသည်ဖြစ်စေ တချို့နေရာတွေမှာ ပြန်ပြောလေ့ မရှိပါဘူး။ ဒါကို အရှုံးပေးတယ်လို့တော့ မယူဆစေချင်ဘူး။ သည်းခံနေတယ်လို့လည်း မထင်စေချင်ပါဘူး။ ဥပေက္ခာလို့ ယူဆချင်ဆပေါ့။ ဒီစကားကို ဆူးမမရော ပြောချင်တာပါ။” စိတ်မဆိုးပေမဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ လေသံနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲရင့်ပါပေတယ်။
နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ professional ပီသမှုကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ “ကျုပ်မှာ ပိဋကတ်သုံးပုံကနေ မဟာယနကျမ်းတွေအထိ ပြစရာတွေ တပုံတပင်ရှိပါတယ်။ ဦးကုလားအကြောင်းလည်း တကယ်မသိလို့ မေးတယ်မထင်ပါနဲ့။ အယ်ဒီတာက အယ်ဒီတာအလုပ် လုပ်ပေးတာပါ။ ကိုရင့်ကို ထိုက်သင့်တဲ့ respect(အပြန်အလှန်လေးစားမှု)ပေးပြီး မေးတာပါ။…….ဒီလောက်ပဲ” ဘယ်လောက်များ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဒေါသသံကင်းတဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ လေသံလေးပါလဲ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကျနော်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်တိုတတ်ကြောင်း ရှေးက ကွန်မန့်တွေမှာလဲ ဝန်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူကြီးကတော့ သူစိတ်မဆိုးတတ်ကြောင်း အမြဲပြောသလို တကယ်လည်း အပြောနဲ့ညီတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အလိုအရ ဒေါသကင်းတယ်ဆိုတာ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်များမှ တတ်နိုင်တာပါ။ ဒါကိုအကဲခတ်မိလို့လည်း ကျနော်က ကိုကြောင်ကြီးကို သူကြီးဟာ စိတ်ကောင်းရှိ သီလမြဲ ဝိပဿနာစွဲ ထူးကဲသူတယောက် ဖြစ်ကြောင်း ၂ခါလောက် ပြောခဲ့တာပါ။
နောက်ပိုင်းသူကြီးနဲ့ ကျနော် အပြန်အလှန်ပြောပုံ ဆိုပုံတွေကိုတော့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။ ကျနော်ရဲ့ ပို့စ်ကကွန်မန့်တွေထဲမှာ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ ခြုံပြောရရင် စကားလုံးအပေါ် နားလည်မှုလွဲတာပါ။ ကျနော်ရဲ့ ဥဏ်ပညာနဲမှုပါ။
အဲ့ဒါဆိုလျှင် ..ကုလားကလေ ..ကုလားကလေ ဆိုပြီး သူ့ မျိုးရိုးဂုဏ်ဖော်ဖော်ပြောတဲ့ ကုလားတွေလည်း …ပြုပြင်သင့်ပြီ …. ။
ဒါဆို လွယ်လွယ်လေး ဒီနေရာမှာ အခြောက်စကားက အသုံးဝင်သွားပြီး ကော်ဒကစ်လော်ဒကားပေါ့အေ………………အဲလိုခေါ်ပေါ့…
ဖဲမှာ ဆို ကော်ဒကစ်လော်ဒကား တက်ရင် ဘူပြီ
ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ လားကု လို.ခေါ်ပေါ့အေ……….. ဟာရှုတ်နေတာပဲ……………….. ခိခိခိ
ဟော်ဒကိုင်း…. ကော်ဒကို ရှော်ဒကွေ တော်ဒကိုက် စော်ဒကိုး..
သာမန်သုံးနှုန်းမှု့နဲ့ ခွဲခြားနှိမ့်ချ ပြောဆိုမှု့ကကွာခြားတယ်လို့ထင်ပါတယ်.. လှတောသားရယ်… အော်..ဒုတ်ခ…ရခိုင်မှာတင် မီးငြိမ်းသွားတာကို မကျေနပ်လို့ ဒီလိုပို့စ်တွေ ဆက်တင်နေတာလားရှင်ရယ်…
ဝိုင်းတွန်းတဲ့အထဲ ကျုပ် မပါပါဘူး..။
မီးစာ ကျန်လို့ ထလောင်ရင်တောင်
ယပ်ခပ်ပေးတာ ကျုပ်မဟုတ် ။
အဲလိုဆိုရင်လည်း အစ်ကို့ရဲ့ ကတ်သီးကပ်သပ် အတွေးလေးတွေကို တခြားပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးခံစားလို့ရမယ့်နေရာလေးမှာသုံးစေချင်တယ်… အဲဒါဆိုရင်တော့ အစ်ကို့ပို့စ်ကို ဖတ်မိတဲ့”လူတိုင်း” အပြစ်ကင်းကင်းပေါ့ပါးစွာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ညီမကို ခင်လို့မင်လို့ဖြစ်စေ ကိုယ့်လူမျိုးနာမည်အရှေ့မှာတပ်ပြီး ခေါ်တာကိုမကြိုက်လို့ပါ.. ဥပမာ ကချင်မ..ကယားမ..ကရင်မ…ဗမာမ..ရှမ်းမ..စသဖြင့်ပေါ့… ညီမတစ်ယောက်ထဲရဲ့ခံစားချက် ဖြစ်ပါတယ်…
ကုလားတွေကို သိပ်ပြီး မနှိမ်ပါနဲ့ ဗျာ ခင်ဗျာတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားက ကုလားလူမျိုး ဆိုတာ စဉ်းစား
ကုလားမို့လို့ နှိမ်တယ်ဆိုတာထက် သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ လူဆိုပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်မရှိရင် အဲဒီ့လူကို လူလို့ခေါ်လို့မရသလိုပါ။ Ko out of ပြောသလိုဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားကို သူတို့နဲ့ တစ်တန်းတည်း ထားလိုက်သလိုဖြစ်နေပါပြီ။
အဲလိုမျိုး ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အခု ကိစ္စတွေက ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။
အော် မင်းတို့က သနားဘို့ကောင်းပါတယ် ။
ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ လူ လူမျိုး ပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မသိဘူလား။
မင်းတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ကိုရမ် ကျမ်း ကိုဘဲကြည့် မင်းတို့ စာအုပ်ကို ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ ။
စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ စာတွေ တရားတွေ အယူအဆတွေကို ကိုးကွယ်တာမဟုတ်လား ။
ဒီအဆင့်မှ မသိသေးရင် ဒီနေရာမှာ ဒါမျိုးတွေ လာ မရေးပါနဲ့နော်..။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်.. ဗုဒ္ဓလို့ကြွေးကျော်သူတွေ…. အိန္ဒိယမှာ..အများကြီး.. ရှိခဲ့ပါတယ်..။ကုလားပြည်မှာ-
မြောက်ဦး (ခေါ်) မြို့ဟောင်းနားက ဝေသာလီ စဏ္ဍန္ဒ မင်းဆက်ဟာ ၄ ရာစုနှစ်က စပြီး အုပ်စိုး ခဲ့တယ်။ မြို့ဟောင်းရဲ့ ရှစ်သောင်း ဘုရားမှာ တွေ့တဲ့ အာနန္ဒစဏ္ဍန္ဒ ကျောက်စာဟာ ခရစ် ၈ ရာစု နှစ်ဦးက ဖြစ်တယ်။ ကျောက်စာမှာ မင်းဆက်ရဲ့ ဘုရင် အချို့ ဘွဲ့အမည် တွေကို တွေ့ရှိ ရတယ်။ ဒီစာရင်း အရ ဒေဝစဏ္ဍန္ဒဟာ မင်းဆက်ရဲ့ အစ ရှင်ဘုရင် ဖြစ်တယ်။ ဒီမင်းတွေဟာ ကြင်နာ သနား တတ်တယ်။ ပေးကမ်းတဲ့ နေရာမှာ ရက်ရောတယ်။ တရား မျှတတယ်လို့ ကျောက်စာမှာ ဖော်ပြ ပါရှိတယ်။ လမ်းပန်း အဆက်အသွယ် ကောင်းဖို့ လမ်းမကြီးတွေ ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီး ဖောက်တယ်။ လယ်မှာ ရေကောင်းကောင်း ရဖို့ ဆည်ကြီး တွေကို ဆောက်လုပ်တယ်။ သူတို့ဟာ ဗြာဟ္မဏ အယူဝါဒ သီဝနတ်မင်းကို ကိုးကွယ် သူတွေ ဖြစ်တယ်။ မင်းတပါး နန်းတက်တိုင်း အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်ရ လေအောင် ပိုက်ဆံ အဖြစ် သုံးစွဲရ လေအောင် ဒင်္ဂါးတွေကို သွန်းတယ်။ အစောဆုံး ဒင်္ဂါးက ဒေဝစဏ္ဍန္ဒ (ခရစ် ၄၅၄ – ၇၆) ရဲ့ ဒင်္ဂါး ဖြစ်တယ်။ မဟာယာန ဗုဒ္ဓ သာသနာကို ခရစ် ၆ ရာစု နှစ်ဦးမှာ ပြောင်းဝင် လာတယ်လို့ ခန့်မှန်း နိုင်ပါတယ်။
↑ ၂၀၀၄ ခု၊ ဇူလိုင်လမှာ ပထမ အကြိမ် မုံရွေး စာအုပ်တိုက် အမှတ်စဉ် (၁၃၄) အဖြစ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းရဲ့ ‘မြန်မာ့ သမိုင်းပုံ’ Myanmar History Told in Pictures စာအုပ်မှ ” ရခိုင်ခေတ်ဦး”
ဒါကုလားပြည်အိန္ဒိယကပြေးလာတဲ့လူတွေ၊ ဗြာဟ္မဏ အယူဝါဒ သီဝနတ်မင်းကို ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကုလားဘာသာဟိန္ဒူကို
ဘဲ၊ကုလားတွေ့ရင်ရှိခိုးနေရတာတွေဘယ်တော့မှဝဋ်ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ . .
သောက်သုံးမကျဘူး ဆိုတာကိုထားလိုက်ပါဦး။ ဘာသာရေးစော်ကားတယ်ဆိုတာကတော့……..
ထေရ်ရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းကို အသေအချာပြန်လေ့လာလိုက်ဦး။ ဗုဒ္ဓဟာ ဘာလူမျိုးလဲဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် အရေးမကြီးဘူး။ အရေးကြီးတာက ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဘဲ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကို ပူဇော်ရှိခိုးတာဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဟာ ကုလားမို့လို့ ကုလားတွေ့တိုင်းထိုင်ရှိခိုးလို့ နင်ပြောခဲ့တယ်နော်။ အေးအဲဒါဆိုရင် နင်အမေလည်းမိန်းမ၊ နင့်မယားလည်းမိန်းမ ဆိုတော့ နင့်အမေတွေ့တိုင်း နင်လည်း……..
hnin sai ဆိုတဲ့မိန်းမလားယောင်္ကျားလားမသိတဲ့သူရေ
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကို သေသေချာချာမလေ့လာဘဲနဲ့ ရေးထားတာပဲ… ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ လူကို ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကို ရှိခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားကိုယုံကြည်ရုံနဲ့ ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ရတာပါ။ ဗုဒ္ဓဟောကြားသွားတဲ့ တရားတော်တွေကို သေချာလေ့လာပြီး မှားတဲ့အချက်တွေကို ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓက လာလှည့်၊ ရှုလှည့်ဆိုပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ စမ်းသပ်ခိုင်းထားပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ငါတို့ ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဆိုတာကို မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်တွေကို လေ့လာပြီး လက်ခံနိုင်လို့ ကျင့်သုံးလိုက်နာနေတာပါ။ အဲဒီလို လမ်းစဉ်မျိုးတွေ ဟောကြားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓကိုလည်း ကြည်ညိုလို့ ရှိခိုးကြတာပါ။
အဲဒီတော့ ဘုရားဘာလူမျိုးလဲဆိုတာ ငါတို့အတွက် အရေးမကြီးပါဘူး။
နင်ဘာကိုးကွယ်လဲတော့မသိဘူး။ နင်တို့ဘာသာမှာတော့ မူထက် လူက ပိုအရေးကြီးကောင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓအကြောင်းပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သေချာလေ့လာပြီးမှ ပြောပါ။
ခင်ဗျားတို့ကို စေဒနာဗလပွနဲ့ ကြပ်ပေးပါမယ်
ကလားတွေ ကို ကလားလို့ ခေါ်တဲ့သူတွေက အနှီးကလားတွေ ကို ဘာ့ကြောင့် ကလားလို့ခေါ်တာလဲ
ကုလားလို့ အခေါ်ခံရတဲ့ အနှီးကလားတွေကရော ကလားလို့အခေါ်ခံရတာကို
ခင်ဗျားတို့ လွယ်လွယ်တွေးဂျဇမ်းဘာ ဖင်မယားကြစမ်းပါနဲ့
ကုလားကို ကုလားလို့ခေါသင့်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ မွတ်စလင်မ် အားလုံးကတော့ ကုလားမဟုတ်ဘူး
အဲဒီနေ့က သတင်းမှာ သေဆုံးသူအားလုံးကို ချုံငုံပြီးပြောလိုက်လို့ ရှုတ်ကုန်တာထင်ပါတယ်
ဟင်းးး ငါ ပြောလိုက်ရတော့ လွန်သွားမယ်…။ ဟိုက် ပြောပြီသွားပြီ ပွိုင့် လော့ဦးမလားမသိဘူး …။
သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောဘဲနဲ့၁၀ ယူသွားပါအိ ။
ကုလားဆိုကဲ့ အသုံအနှန်းကို သူတိုက ပိုတောင်သုံးနေသေးတယ် ဒီလို အေ၇းအခင်းမဖြစ်သေးခင်အချိန်ကပါ ကုလားလဘ္ဘက်၇ည် ဆိုင်မှာလဘ္ဘက်၇ည် သောက်နေတုံ ကြားလိုက်၇တာက မောင်တောဘက်ကလာတဲ့ကုလားကို ဒန်အိုးဈေးဆစ်တာ အဆင်မပြေလို့ ပြောလိုက်ပုံ လေးက စောက်ကုလားတဲ့ နောက်နင့်ဆီ ကဘယ်တော့မှ မ၀ယ်တော့ ဘူးတဲ့ သူတို့ချင်းချင်းတောင်ဒီလိုပြောနေတာခုမှဘဲနာ၇မှန်းသိတယ်
မြို့ထဲမှာ တနေ့ကတွေလိုက်တဲ့ အမဲအူသုတ်ဆိုင်နာမည်က “ကုလားမ”တဲ့
ဒါနဲ့ ရောင်းတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း တကယ်ကုလားမပဲ
သူကြီးအခါခါပြောဖူးပေမယ့် ခုမှ ပြန်ကူးထားလိုက်တော့မယ်။
ကျုပ်နားလည်သလောက်.. ဆူးလေမှာဆန္ဒပြသူတွေဆိုလိုတာက.. နိုင်ငံအဆင့်အစိုးရသတင်းစာမှာ..သုံးလိုက်တဲ့.. လူမျိုးရေး.. ဘာသာရေး ခွဲခြားအဓိပါယ်ရောက်စေတဲ့.. အသုံးအနှုံးကို… မကြိုက်တာပါ..
– ဦးဂိုအင်ဂါက.. ကုလား = ကုသလ = ကုသိုလ် တဲ့..
– ဦးကုလား ဆိုတဲ့…ဦးကုလားမဟာရာဇ၀င်ကြီးရေးတဲ့သူကတော့.. အဖေက.. သူဌေးမျိုး။။အမေဖက်က.. စော်ဘွားနဲ့. မြို့စားမျိုးပါ..။ (မြို့သာစားမုနောဒိုင်းမှုးကျော်ထင်ရဲ့သမီးမဏိသြဃနဲ့.. စဥ့်ကိုင်သူဌေးဒေ၀သေဋ္ဌတို့ရဲ့သား.. အင်းဝမြို့မှာဖွားတဲ့.. ဦးကုလား)
တည့်တည့်ပြောရရင်တော့… ကုလားဆိုတာ.. မြန်မာတွေအတွက်.. အိန္ဒိယပြည်ကအနွယ်တွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပြီး..နှိမ်ချလိုတဲ့သဘောနဲ့..ခေါ်ခဲ့ဟန်မတူပါ..
ကုလား ဆိုတဲ့.. အသုံးအနှုံးကို..ကာယကံရှင်များက မကြိုက်ရင်.. အိန္ဒိယပြည်ကအနွယ်တွေအားလုံးရဲ့.. သဘောထားတောင်းရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့.. ဒီအသုံးအနှုံးကို.. နိုင်ငံအဆင့်သတင်းစာက.. လူမျိုးရေး..ဘာသာရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. အကဲဆတ်နေတဲ့အချိန်မှာသုံးရင်.. ဒါဟာ.. သဘောရိုးမဟုတ်ဖူးလို့..ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီစာကိုရေးတဲ့ သူ ဟာ-
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို ဘာမှလဲမသိပဲနဲ့
ထေရ၀ါဒ ကို စော်ကားထားတယ်။
ထေရ၀ါဒ ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် စော်ကားထားတယ်…။
ထေရ၀ါဒ ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးနှက်စော်ကားထားတယ်…..။
နိုးပလာဘလမ်ဘာ နကမ္ပတိ( မတုံလှုပ်ပါ )
ဟုတ်ပါတယ် ဦးဦးပါလေရာရေ……… အဲဒီ့စာကိုရေးတဲ့လူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို သေချာမသိဘဲ
ကလေးများလို နိုင်မယ်ထင်တာနဲ့ ရမ်းသမ်းပြောသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ်နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုသလိုပေါ့။ ဒါနဲ့ ဒီစာရေးတဲ့သူက ကလေးလေးတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။
ရွာထဲတွင် ပါးစပ် ၌ ချီးပေနေသော ခွေးမဲ သုံးကောင် ဟောင်နေပါသည်၊ မောင်းထုတ်ကြပါ၊
သူတို့ အားလုံး ချ ထားတဲ့ စည်းကမ်း ကို လောဘကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဒေါသကြောင့်ဖြစ်စေ ဖောက်နေတာ။
ကစားကြပါစေ ဆိုပြီး တမင်လွှတ်ပေးထားတဲ့ ဒိုင် ကို တောင် ဂါရဝ ကင်းကင်းနဲ့ ရန်လုပ်ချင်သေး။
အလကား ပေးကစားထား တဲ့ ကွင်း အတွက် ကျေးဇူးတရား ကို နဲနဲသိဖို့ မပြောနဲ့။
တံထွေး နဲ့ ထွေးကြတယ်။
ဒါမှ သားတို့ဦးကြီးရဲ့ ညီလေး ဦးလတ်ကွ
“”ကျမတို့ကို အကြံပေးစရာရှိရင် ပေးပါ၊ အကြံပြုစရာရှိရင် ပြုပါ။ ဝေဖန်စရာ ရှိရင်လည်း ဝေဖန်ပါ။ စေတနာနဲ့ ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဝေဖန်မှလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြင်နိုင်မှာပါ။ ဝေဖန်တာကို မကြောက်ပါနဲ့၊ ဒီဝေဖန်တာ မမှန်ရင် ထည့်စဉ်းစားစရာ မလိုဘူး၊ မေ့ပြစ်လိုက်။ မှန်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြုပြင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရတယ်။ အဲ့ဒီ အခွင့်အရေးအတွက် ကျမတို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။””
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဇွန် ၁၆ ၂၀၁၂) Nobel Peace Center
ကစားသမား စိတ်ဓာတ်မမွေး နိုင်သေးခင် ဝင်မကန်တာပဲကောင်းပါတယ်ဗျာ !
အမှား နည်းတာပေါ့ !
ခံစားချက် နဲ့ဝင်ကန်ရင် နိုင်ရင် ပျော်မိသလို ရှုံးရင်လည်း ဒေါသ ဖြစ်မိမယ် !
အနိုင် အရှုံး မပေါ်ဘူး ဆိုရင်လည်း ပြိုင်ချင် ဖက်ချင် တုချင် တဲ့ စိတ်က များနေမယ် !
ဒီတော့၊၊၊၊၊ သူများရေးတာပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးဖတ်တော့မယ်၊
သူများ ကန်တာပဲ ထိုင်ကြည့်နေတာကောင်းပါတယ်ဗျာ၊
ကိုယ့်အမှားကိုပြန်ကြောက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး ! ကိုယ့်အမှား ကြောင့် သူတပါး စိတ်အနောင့်အယှက် မဖြစ်စေချင်တာပါ၊
တခါတရံမှာ လူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စေ ရပ်တည်မှူ့ မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လို့မြင်လာသမျှ ကိုအနည်းနဲ့အများ တန်ပြန်တုံ့ပြန်ချင်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တုံ့ပြန်ပုံချင်း ကတော့ လူ တယောက်နဲ့တယောက် မတူကြပါဘူး ! တကယ်နားလည်တဲ့ သူက အဲဒါလေးကို သိတယ်၊ ဥပမာ အနေနဲ့ပြရရင် ကျွန်တော် တို့သဂျီး ပေါ့၊ သဂျီး က အဲဒါလေးကို သိတယ် ၊ ဒါကြောင့် ဒီကွင်းလေး ကို ဖန်တီးပီး အားလုံးကို ပေးကန်ထားတာပါ၊ အချိန် အတိုင်း အတာ တခုရောက်ရင် လူတွေဆိုတော့ သူ့ဟာသူ နားလည်သွားမှာပါဗျာ၊
မှတ်ထားကြပါ မွတ်မွတ်စ် အပေါင်းတို့
ဤ နိုင်ငံသည်ကား ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံပေတည်း
အစ္စလာမ် နိုင်ငံ မဟုတ်ချေ
သိပ်ဟောင်နေလျှင် သင်တို့ အတွက် နေစရာမြေရှားပါးလာလိမ့်မည်
ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်မမြင်တတ်လျှင် သင်တို့ အတွက် ဝမ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်မျိုး
ထာဝရ ကြုံတွေ့နေရမည်မှာလည်း သေချာနေပေတော့သဖြင့်
ဟောင်နေသည့် အပေါက်များ ယ္ခု အချိန်မှစ ပိတ်ကြပါလေကုန်လော့ ။
( သင်တို့ ကြောက်ရွံ့နေသော စကားပုံ အသက်ဝင်စပြုနေသည်ကို မသိကြပါလော)
မောင်လူကလေးဤ နိုင်ငံသည်ကား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတည်း၊လူမျိုးပေါင်းစုပေါင်း
ကတည်း၊သင်လည်းကုလားတကောင်းပြည်ပြန်ရမည်ထင်သည် . .
ကျမကတော့ ကုလားကြီးတွေကို ကလီးယား (clear) လို့ခေါ်ပါတယ် ….:)